MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 844
> ရွှေ့ပြောင်းအိပ်မက်အောင်ဝေးနိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၀၈ ဧရာဝတီမှ မစ္စစ္စပီသို့ ငမိုးရိပ်မှ မစ်ရှီဂန်သို့ ။ မုဆိုးတွေ စည်းပျက်တော့ယာခရိုးကချိုးလင်းပြာ ငှက်ကလေးလည်းလွတ်ရာပြေးရတာပေါ့။ တရားမမျှတတဲ့အခါဘ၀ဟာမလုံခြုံပါဘူး။ ရွှေဝါရောင် ညညတွေမှာခဏခဏပြောင်းပြောင်းအိပ်ရတဲ့ပုန်းခိုကျင်းကလေးတွေ။ ပြေးနေတဲ့ လူရဲ့စိတ်ဟာလေးလံလွန်းလှပါရဲ့။ အိပ်မက်ကို မစွန့် လွတ်နိုင်ဘူးသွားလေရာအပင်ပန်းခံ လွယ်လွယ်သွားရတယ်။ ခုလည်းပဲကိုယ့်ဝပ်ကျင်းကလေးထဲကိုယ်ကိုယ့်အိပ်မက်နဲ့ ကိုယ်။ မပျော်ပါဘူးတတိယနိုင်ငံဆိုတာပထမနိုင်ငံမှမဟုတ်တာ။ ။ အောင်ဝေး(အောက်တိုဘာ ၁၀ – ၂၀၀၈) No tags for this post. Related posts No related posts.
> Cartoon Win Pe – November 3rd, 2008 From New Era Journal Nov 2008 Publication No tags for this post. Related posts No related posts.
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 18
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 18 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Nyi Nyi Htway photo
> နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၏ရှေ့နေ လျှပ်တပြက် ထောင်ချခံရ ဓာတ်ပုံသတင်း နိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ကူညီစဉ် ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့က ထောင် ၆ လ ချခံခဲ့ရသည့် ရှေ့နေ ကိုညီညီထွေး။ ထိုသို့ ထောင်ချခံရသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာလူငယ်ရှေ့နေများ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းက ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဤနေရာတွင် ဖတ်ပါ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Po Jan – News on the road inarush – 2nd Nov 2008
> လမ်းပေါ်က အပြေးအလွှား သတင်းများ ဖိုးဂျံ နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ မြန်မာစစ်အစိုးရ လက်အောက်မှာ တရားဥပဒေက ပြည်သူကို လုံခြုံမှု မပေးနိုင် စည်ကားတယ် ဆိုပေမယ့် မှန်းချက်မကိုက်တဲ့ ကွန်ပြူတာ ပြပွဲ ဆုတွေ ရကြတယ် ဆိုလို့ လူတွေက နားစွင့် ပန်းချီပြပွဲတွေကို စိစစ်မှု တင်းကြပ် မြန်မာစစ်အစိုးရ လက်အောက်မှာ တရားဥပဒေက ပြည်သူကို လုံခြုံမှု မပေးနိုင် ယခင်အပတ်မှာ ၈၈ မျုိးဆက်ကျောင်းသား ၉ ဦးကို တရားရုံးက ရုံးတော်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုပြီး ထောင် ၆ လနဲ့ မအူပင်ထောင်ကို ပြောင်းလိုက်တယ်။ မတရားအဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကို စစ်အစိုးရက မထီမဲ့မြင်သဘောနဲ့ ထောင်ထဲပစ်ထည့်ပြီး မတရားချုပ်ထားက တနှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ အာဏာပိုင်တွေကို သူတို့ဥပဒေအရ...
>poem for U Win Tin
> မြန်မာပြည်မှ သူရဲကောင်း သတင်းစာဆရာမောင်သြနိုဝင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈ ထောင်ထဲမှာ … ကျားအပြင်မှာ … ကျားအာဂသတ္တိ မြန်မာပြည်သား။ ထောင်ထဲမှာ ရဲစိတ်မှန်အပြင်မှာ ဇွဲစိတ်သန်ယုံကြည်ချက်ကို ဦးထိပ်ပန် … ထောင်ထဲမှာ ဒီစိတ်အမျိုးသားရေး ချစ်တဲ့စိတ် … ထောင်ထဲမှာ ဒီနှလုံးသားအပြင်မှာလည်း ဒီနှလုံးသားဒီမိုကရေစီရဲ့ ဘက်တော်သား … ထောင်ထဲမှာ ဒီဝတ်စုံအပြင်မှာလည်း ဒီဝတ်စုံလူ့အခွင့်အရေး နိမိတ်ပုံ … ထောင်ထဲမှာ ဒီစကားအပြင်မှာလည်း ဒီစကားဖြောင့်မတ်ခိုင်ကျည် သစ္စာတရား … ထောင်ထဲမှာ ဒီအပြုံးအပြင်မှာလည်း ဒီအပြုံးပြည်သူ့အတွက် သူ့မျက်လုံးနိုင်ငံအတွက် သူ့မျက်လုံးအနှစ် ၂ဝမျှအကျဉ်းကျခံ အုတ်နံရံထဲဆင်းရဲမွန်းကျပ် နေခဲ့လတ်လည်းစိတ်ဓာတ်ခိုင်ကျည် ရဲရဲနီလျက်အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးသတ္တိသွေးကို လေးစားပါသည်တို့ ယုံကြည် …အို … ပြည်သူချစ်သော သတင်းစာဆရာသင်၏ နှလုံးသားမှ …NLD...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 17
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 17 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Mar Mar Aye 251
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၁)ရုပ်သေးသဘင် နှင့် ရွှေပြည်ကြီးသီချင်း (အပိုင်း-၂)မာမာအေး နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ အသံနားဆင်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ (photo: Sthilari) သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ လုံးလုံး စကားမပြော ချစ်စရာ့ရုပ်သေးတို့တောမှာ ဟိုစာရှာ သည်စာဖတ်နဲ့ စုတတ်သမျှ စုလိုက်ရင်ပဲ အဆင်ကွဲသီချင်းတပုဒ် ဖော်ထုတ်ပေးချင်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကလည်း ‘ရွှေပြည်ကြီး’သီချင်းပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၊ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားက ထုတ်တဲ့ တေးရေးပညာရှင်ကြီးများ၏ ခေတ်ဟောင်းတေးသီချင်းများ အတွဲ(၁) မှာ တွေ့တာပါရှင်။ ရှေ့တပတ်က ပြောပြခဲ့တဲ့ မြန်မာဂီတရေစီးကြောင်း...
>2nd Nov 2008 – MoeMaKa Sunday Weekly Program
> မိုးမခရဲ့ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီ နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ ကျော်ကျော်နိုင်ဆိုင်းနဲ့ အမေရိကန်သံစုံဝိုင်း သတင်းထွေလာ သီချင်းပဒေသာ မန္တလေးမြို့တည်နှစ် (၁၅၀) အကြို နဲ့ မာမာအေး မန်းရာပြည့်တေး လတ်တလော မြန်မာ့စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း (SBS) မြန်ပြည်တလွှား ဆိုးခိုး တိုက်ခိုက်ကြပုံများ ၀-ပ-က နဲ့ AAPP ကြေညာချက်များ မောင်စူးစမ်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီ – ဗသြ စာပေဟောပြောပွဲဂုဏ်ပြုအကြိုအစီအစဉ်များ (၁) မင်းလွင် ဆိုတာ ဘာလဲ – သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း (၂) သက် ၁၀၀ ကျော် ရွှေဟင်္သာဆရာတော် (၃) ကိုဗဟိန်းသို့ စကားကြွေး – လူထုဒေါ်အမာ (၄) သီချင်းတောင်းတဲ့ ပန်တျာမောင် (၅) သီချင်းဆိုတဲ့...
>Pe Maung Tin by Htain Linn
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၂) ပထမဆုံး မြန်မာပါမောက္ခ ဦးဖေမောင်တင်ထိန်လင်းနိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ သက်ရှိသက်မဲ့ အရာဝတ္ထုတွေဟာ သူ့နေရာနဲ့သူ အံဝင်ခွင်ကျ ရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ နေရာတွေမှာ မရှိဘူးဆိုရင် တခုခု ချွတ်ချော်တိမ်းပါးနေပြီဆိုတာ သိရမှာဖြစ်သလို နေရာမှန် ရောက်ရှိရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ‘လူမှန် နေရာမှန်’ ဆိုတဲ့စကားက အဲဒီလိုနေရာမျိုးမှာ သုံးတဲ့စကားပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ မကြာသေးခင်က ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ မင်းသိင်္ခက ‘သူဌေးက သူဌေးလိုမနေဘဲ ခြံတံခါးတွေ သော့ခတ်ပြီးပြီလား၊ အိမ်တံခါးရော လုံရဲ့လား ဆိုပြီး အမြဲလိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် သူဌေးနဲ့တူတဲ့ သူဌေးမဟုတ်ဘဲ၊ ဒရဝမ်နဲ့တူတဲ့ သူဌေး ဖြစ်လိမ့်မယ်’လို့ သူ့ရဲ့စာထဲမှာ ရေးဖူးတာ သတိရမိပါတယ်။ စာပေပညာရှင်တွေဟာ စာပေတာဝန်ကျေရမယ်၊ ဥပဒေဘက်တော်သားတွေက...
>White Rainbow Poem Festival – Part 3
> White Rainbow Poem Festival – Part3MoeMaKa VD November 2nd , 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Kathina ceremony in Chiang Mai
> ချင်းမိုင်မှ မြန်မာကထိန်ပွဲဓာတ်ပုံသတင်းနိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ ယမန်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယမြို့တော် ချင်းမိုင်မြို့(ဇင်းမယ်မြို့)တွင် တွေ့ရသည့် မြန်မာပြည်သား အလုပ်သမားများ၏ စုပေါင်းဘုံကထိန်ပွဲ။ ယခင်နှစ်များက ကထိန်ပွဲကို ၀ပ်ဆိုင်းမွမ်းမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင်သာ ပြုလုပ်ကြသည်။ ယခုနှစ်မှသာ ချင်းမိုင်မြို့အတွင်း ကထိန်အလှူပွဲ လှည့်လည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကထိန်ပွဲတွင် မြန်မာပြည်သားများ ရာနှင့်ချီပြီး ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်း၌ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ရေစက်ချ တရားနာခဲ့ကြသည်။ (ဓာတ်ပုံ – နော်အဲ၊ အေးအေးမြင့်) No tags for this post. Related posts No related posts.
>Soe Thint Swe – short story 01
> မိဘကျေးဇူး တရားဟောဆရာစိုးသင့်ဆွေနိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၀၈ ဒ်ီထမင်းဆိုင်ကို ဒီအချိန်ဆို သူလာနေကျ၊ ဒီအချိန်ဆိုတာက နေ့လည် ၃နာရီလောက်ကိုပြောတာ။ နေ့လည်စာ စားသောက်တဲ့လူတွေလည်း ရှင်းပြီ။ ပြီးတော့ ဟင်းတွေကို လျှော့ဈေးနဲ့ စရောင်းတဲ့အချိန်။ ဆိုင်က ညနေ ၆နာရီကျော်ရင် ပိတ်ပြီဆိုတော့ မနက်ပိုင်းရောင်းမကုန်တဲ့ ဟင်းတွေကို နောက်နေ့ထိ ဆက်ထားလို့မဖြစ်၊ ဒီတော့ ၂နာရီခွဲကျော်ရင် စပြီး လျှော့ရောင်းတော့တာပဲ။ ဆိုင်ကလည်း ခမ်းခမ်းနားနားမဟုတ် အိမ်ရှေ့မှာ ဓနိမိုး အဖီထိုးပြီး ရောင်းတဲ့ဆိုင်။ ခုံတန်းလျားရှည်ပေါ်မှာ ဟင်းအိုးတွေ တင်ထားမယ်၊ ခုံနဲ့တဆက်ထဲမှာ ပျဉ်ပြားတချပ်ကို ပတ္တာနဲ့တွဲရိုက်ပြီး မလိုချင်ရင် ဖြုတ်ထားလို့ရမယ်၊ စားပွဲလုပ်ချင်ရင် ပျဉ်ပြားကို ဆွဲမ ပြီး အောက်က တုတ်နဲ့ထောက်ထားလိုက်ရုံ အလွယ်လုပ်ထားတဲ့စားပွဲ။ ဒီစားပွဲပေါ်မှာပဲ လာစားတဲ့သူတွေက ပန်းကန်တင်စားတယ်၊...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 16
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 16 No tags for this post. Related posts No related posts.
>Aung Din – Coffee Poem
> ကော်ဖီ အောင်ဒင် နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ချစ်သူရေ မင်းကိုငါ နံမည်တခုပေးမယ် …. ကော်ဖီ မင်းကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မင်းသိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ မင်းရဲ့နာမည်အသစ်ဟာ …. ကော်ဖီ။ မင်းကိုသတိရလိုက်ရုံနဲ့ ညတွေဟာအဆုံးမဲ့၊ အစမဲ့ရှည်လျား တဟုန်ထိုး တိုက်ခတ်လာတဲ့ အလွမ်းလှိုင်းလုံးတွေကြား အိပ်ပျက်ညတွေ များသထက်များ …။ ဘယ်တော့များမှ တို့ဆုံဆည်းကြမှာလဲ မချင့်မရဲ ပူပန်မှုတွေ ရင်ထဲထိုးဖောက် နှောက်ယှက်သွား စိတ်ကိုမှန်တဲ့မြှားချက်များ …။ မင်းအချစ်ဟာ ခါးသက်သက် ကော်ဖီတခွက်လို စွဲမက်ဖွယ် ကြေကွဲမှုတွေပေးတယ် သတိရခြင်းတွေပေးတယ် အလွမ်းနဲ့ပူပင်သောကတွေပေးတယ် အတူတူနေရဖို့ တောင့်တခြင်းတွေပေးတယ် ….။ မိန်းကလေး ရယ် မင်းရဲ့နာမည်အသစ်ဟာ … ကော်ဖီ … ။ ။ No...
>Myanmar ICT Exihibition host for 10 Years
> ရန်ကုန် တပ်မတော်ခမ်းမတွင် အိုင်စီတီ ပြပွဲ စည်ကား မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃၊ ဓာတ်ပုံသတင်း နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ယခု ရက်သတ္တပတ်က စပြီး ၁၀နှစ်မြောက် အိုင်စီတီပြပွဲကို ရန်ကုန်၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ တပ်မတော်ခမ်းမမှာ ကျင်းပပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ သတင်းဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီအများအပြား ပြခန်းယူ ဖွင့်လှစ်ကြပြီး အပြိုင်အဆိုင် ဈေးများ ချရောင်းကြလို့ စားသုံးသူတွေက ကျေနပ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရောင်းမြှင့် အမျိုးသမီးငယ်လေးများ၊ မော်ဒယ်လူငယ်များနဲ့ ဖျော်ဖြေရေး သရုပ်ဆောင်တွေကို သုံးစွဲပြီး ဆွဲဆောင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရဟန်းသံဃာများလည်း ပွဲတော်ကို တက်ရောက်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကို ရှုစားနိုင်ပါတယ်။ (မိုးမခ – ဓာတ်ပုံ) No tags for this...
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခန်း(၁၄) အောင်ဝေး နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၈ ဘယ်ခေတ်မှာမဆို မဆလ ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နဝတ ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခုလက်ရှိ နအဖ ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ခေတ်ဖြစ်ပစေ၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တိုင်းဟာ သမိုင်းအရ အမြဲအရေးပါတယ်။ ဒီလိုအရေးပါတဲ့နေရာ၊ သေနင်္ဂဗျူဟာကျတဲ့နေရာကို မဆလ- နဝတ စစ်ပဒေသရာဇ် အဆက်ဆက်က အခိုင်အမာ စိုးမိုးနေရာယူထားကြတယ်။ မဆလ စစ်တပ်က ထွန်းလင်းယုန်၊ ရွှေလင်းယုန်၊ မိုးဟိန်း စတဲ့ စစ်ဆင်ရေးတွေနဲ့ ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေကို ချေမှုန်းခဲ့တယ်။ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ ခုခံရေးစစ်ပွဲတွေထဲက သိလ်လာတိုက်ပွဲ၊ ငွေသောင်ယံတိုက်ပွဲတို့ဟာ ထင်ရှားခဲ့တာပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ထောင်ပိုင် စစ်ဆင်ရေးဆိုပြီး မဆလ ဆန့်ကျင်ရေး လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီလို သေနင်္ဂဗျူဟာကျတဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တိုင်း၊...
>Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 15
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 15 No tags for this post. Related posts No related posts.
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ စမ်းချောင်း ၃ ထပ်တိုက် တခြမ်း ပြိုကျ၊ ရန်ကုန် အဲဝေး သံတွဲခရီးစဉ် နားမည်၊ နာဂစ်အပြီး မိုးလေ၀သ ကြေညာချက်များ ပိုကောင်း၊ မန္တလေး လူငယ်များ ပြည်ပမှာ ပညာသင်လိုသည်၊ မန္တလေး နိုင်ငံခြားဘာသာသင် တက္ကသိုလ် တရုတ်နိုင်ငံသားများ တက်ရောက်၊ မလေးရှားသို့ ဆိတ်အရှင် ၁၅၀၀ ပို့မည်၊ လိုအပ်ပါက နိုင်ငံတော် စာရိတ်ဖြင့် တရားခံ ရှေ့နေငှားယမ်းပေးမည်၊ တိရစ္ဆာန်စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ ဈေးကောင်းရ၊ တိုက်ကြီးကား တိမ်းမှောက်ပေါက်ကွဲမှု သတင်းထုတ်ပြန်၊ အိန္ဒိယက ၀က်အရှင် ၀ယ်မည်။ ဒီနေရာမှ ဖတ်ပါ့ ။ No...
> ရုပ်ရှင်မင်းသား မြတ်လေးမောင်စွမ်းရည်အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ မြတ်လေး (ပန်းချီ ညိုဝင်း) ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေဟာ အများအားဖြင့် ရန်ကုန် မြို့တော်မှာ အနေများပါတယ်။ ကျနော်က မန္တလေးမှာ ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေနဲ့ နီးစပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်မင်းသားမြတ်လေးနဲ့ ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းတို့ကတော့ ကျနော်တို့နဲ့ ခေတ်ပြိုင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်နေလို့ ရင်းနှီးခွင့် ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော် မန္တလေးတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့ကာလ ၁၉၅၆-၆ဝ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မန္တလေးတက္ကသိုလ် နဲ့ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ် ကျောင်းများက ကျောင်းသားညီညွတ်ရေးတပ်ဦးနဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များဟာ မကြာခဏ တွေ့ဆုံရင်းနှီးခွင့် ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းသားပွဲတော်များ ပညာရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ မကြာခဏလုပ်ပါတယ်။ အားကစားအဖွဲ့၊ စာပေအဖွဲ့ (ကလောင်ရှင်အသင်း)၊ အနုပညာအဖွဲ့တွေလည်း ပါဝင်တတ် ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားကဖိတ်တဲ့ လူငယ်ပွဲတော်တွေကိုလည်း...
>Aung Way POems Book
> ကဗျာဆရာ အောင်ဝေး ခရမ်းပြာမြင်းရိုင်း ကဗျာစာအုပ်ထုတ် ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ ဂျပန်က အာဟာရ မြန်မာစာအုပ်တိုက်က ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာကဗျာဆရာ အောင်ဝေးရဲ့ ကဗျာ ၂၆ ပုဒ်၊ မိတ်ဆွေများရဲ့ အမှာစာ ၃ ပုဒ်ကို စုစည်းပြီး ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်ဝေချိန်က မတ် ၂၀၀၈ ဆိုတော့ ကဗျာဆရာ အောင်ဝေး အမေရိကန်ကို ပြောင်းရွှေ့ ခိုလှုံချိန်မှာ ထွက်ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အာဟာရရဲ့ ၇ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်တဲ့စာအုပ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀ လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စာအုပ် ဝေဖန်ရေးတို့ ထင်မြင်ချက်တို့ကိုတော့ သိသူ တတ်သူများက ရေးပါလိမ့်မယ်။...
> Cartoon Aw Pi Kye – Saving our Earth and Environment – Cartoon Series 14 October 30 th 2008 (Save water … ) No tags for this post. Related posts No related posts.
> ကာတွန်း မောင်ရစ် – ကျောက်ခေတ် ငြိမ်းချမ်းရေး အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ (ပြန်လည်ဆန်းသစ် ကာတွန်း) No tags for this post. Related posts No related posts.
> ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် သီတဂူဆရာတော်ကြီး၏ တတိယမြောက် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့၊ ၇ ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အီတိုး၏ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများ၊ ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုရ မြန်မာကျောင်းသား၊ ပင်လယ်ဓားပြ ပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည့် မြန်မာသင်္ဘောသားများ စသည့် မျက်မှောက်ရေးရာ သတင်းများ မင်းခန့် ၏ ကဗျာ – တဖန်ပြန်လည် ဦးညွတ်ခြင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်း – ဒီမိုကရေစီရအောင် ဘာလုပ်နိုင်သလဲ လူထုဒေါ်အမာ ၏ဆောင်းပါး – ဗန်းမော်တင်အောင် ဋီကာ (စီစဉ်သူ ထိန်လင်း) No tags for this post. Related posts No related posts.
> ၈၈ အရေးတော်ပုံက ပေါ်ထွန်းလာသည့် ကျောင်းသားတပ်မတော် ဖွဲ့စည်းခြင်း အနှစ် ၂၀ ပြည့် ပို့စကဒ်ထွက်ရှိ မိုးမခ ဓာတ်ပုံသတင်း အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၎င်းတို့ ၀က်ဆိုက်ကို သည်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ http://www.absdf8888.org/ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 844 of 896«1...842843844845846...896»
Law Eh Soe - Song from old nest
MoeMaKa Dot Com is down for now
>Burma VJ goes online
>BBCBurmese dot com is dancing with Myanmar3
>Burma celebrates festival with splash of freedom
အရှင်သြသဓ၊ ဟပ်မွန်းဗေး - ဒုတိယအကြိမ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တိပိဋကတ်သုံးပုံ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ
ဗိုလ်ထက်မင်း - NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အရေး၊ အသွင်မတူတဲ့ အမြင်များ ကောက်နုတ်ကြည့်ခြင်း - အပိုင်း( ၂)
Join 93,725 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month May 2018 (155) April 2018 (184) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ https://t.co/TugPveIht3 https://t.co/tBsewScZmI about 52 minutes ago ReplyRetweetFavorite
မေငြိမ်း ● မိဘနဲ့ သားသမီးဆိုတာ https://t.co/EUR3M6iPBr https://t.co/CDoTPQsrvf about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း လိုင်လုဏ်ရဲ့ ရှေ့သွား … နောက်လိုက် https://t.co/dzQy2uCWhX https://t.co/6AqiNQBQCV about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite
ဒေါက်ထက် (ယူကေ) ● ဘိလပ်ကသူရဲ၊ မြန်မာပြည်ကသူရဲနှင့် ဘီရိုကြီး https://t.co/XxLiuz5EXc https://t.co/nxKjH2pvQF about4hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ လေထဲပျောက်ကုန်ပါဦးမယ်ကွာ …. https://t.co/IWZbG6zJ5u https://t.co/K3VZ0Mz8y9 about5hours ago ReplyRetweetFavorite